Isithombe Apollinaris Vasnetsov hlala ebalulekile e Umdwebo yasekhaya. Imisebenzi yakhe akuzona njengezindawo ezigqamile kanye omkhulukazi, efana webs umfowabo, uVictor, kodwa landscape yakhe imidwebo emincanyana zomlando basithole kuye lokuba omunye abadwebi abanamakhono kakhulu maphakathi nekhulu le-19 - Engxenyeni yokuqala yekhulu lama-20. Umdwebi okuvame ukuhamba kuyo, wahlanganyela abavubukuli, wafunda okuningi, futhi lokhu nakho okucebisayo zabonakala kubonakala emisebenzini yakhe emikhulu, ezinye zazo zichazwe lesi sihloko.
uhlobo indaba ephathwayo
Isithombe Apollinaris Vasnetsov, ngokuvamile enikelwe izifundo zomlando kwansuku zonke, kodwa endaweni egqamile emsebenzini wakhe yena landscape imidwebo. Omunye wabo okuthiwa "Winter Dream". Lokhu landscape kumnandi futhi ngamabomu zokuhlobisa, nakuba ukwakheka muhle kakhulu liyabonakala. Umbhali zaveza ihlathi ebusika, esehlanganise iqhwa Fluffy, nopende ekhethekile kanye nemibala lidluliselwe imfihlakalo futhi inkolo eyayinaso kulendawo enhle.
A ahlukene ngokuphelele umbono Umdwebo "Intaba Landscape". Lo msebenzi yakhelwe lwemibala ehluke ngokuphelele: ku-canvas umculi ayeveza nasezintabeni eziphakeme, futhi bluish tide oluhlaza. Phakathi kwabo kuyinto endleleni ewumngcingo eya kwezakhiwo ezincane yokuhlala. Lokhu Ukwakheka kunikeza umbono wenduduzo kwakubenza bazizwe benethezekile, kodwa into esemqoka - ugcizelela ubuhle kanye nobuhle bemvelo.
Isithombe Apollinaris Vasnetsov ezaziwayo, cishe, ngamunye sibonga umfundi ukuba izifundo yomlando, lapho umsebenzi wakhe ngokuvamile oboniswa abafundi njengoba uchungechunge emihle esihlokweni ifundelwe. Enye yalezi imidwebo ubizwa ngokuthi "iSikhulu Yard ethize." Lona yezindawo ezidumile iningi lemisebenzi yakhe, okuyinto edingekayo umzamo omkhulu nangekhono ezivela kuye. Umbhali ngesakhiwo ukubeka isiqephu abendlu Russia ephakathi ngekhulu le-12. Maphakathi ukwakheka - isikhulu isiRashiya, ethola inkokhiso evela izakhamuzi. Itholakala kwi isizinda amakota yabesifazane kuvulandi wendlu lapho umbhali ukuboniswa umndeni wakhe. Egcekeni izinceku Ukugcwala, izinceku kanye abalimi abavamile. Ngakho, Vasnetsov wabonisa izingqimba nomphakathi isikhathi ezinkulu ephakathi. Wabonisa ukuba connoisseur omkhulu bokwakha lasendulo, ukukhiqiza futhi ngokunembile amasango umbhoshongo, igceke lethempeli.
Enye ngendwangu abadumile zomlando nombhali - Umdwebo "Moscow ezibiyele nge Dmitry Donskoy". Ngenxa ikhono labaculi, siba nethuba lokufunda kubukeka kanjani izinqaba ekhulwini le-14. Vasnetsov yabonisa zokuzivikela odongeni, indlu, isitshalo, amathempeli, ukuboniswa emfuleni lapho abantu uhwebo lwalubalulekile enhlokodolobha yase ubukhulu.
imidwebo umdwebi sika abhalwa static. Wakhetha ukusebenzisa umfanekiso izigcawu kwansuku noma izakhiwo yesikhathi esidlule. Umsebenzi wakhe "Umuzi omdala" uphefumula ukuzola nokuthula. On the ngendwangu okubonisa i abalahliwe, eqhugwaneni awunalutho. Nokho, naphezu umbono kunalokho omubi lale mpahla, ukwakheka kuveza umbono omuhle ngenxa imibala samaholide landscape: kotshani obuluhlaza, elikhanyayo sky blue, emoyeni libalele. Lezi shades elikhanyayo like grey umthunzi eqhugwaneni olungaphambili lwesonto, olubheka wedwa nakakhulu phakathi lo mkhosi of nature. Ngakho, isithombe Apollinaris Vasnetsov ziwumthombo olukhulu ukutadisha umlando Russian futhi ukuphila kwabantu kule minyaka eyikhulu edlule.
Udweba kanjani izibani enyakatho: ukudala enhle ngezandla
"I eSistine Madonna" - umsebenzi wokuhlekwa wayeyisazi womculo enkulu Raphael
Ukuhlela ukwakheka Bove Osip Ivanovich: Biography, uhlu imisebenzi
Manicure kwesitayela: maroon izinzipho
Emfanekisweni Kungani Orthodox
"Babegcina" noma "obuphelele ': sokupeleta igama?
Serious unenkinga - elele singathatha
Abanikazi abangcwele ngamagama nosuku lokuzalwa. Indlela yokufunda igama lomgcini ongcwele
Magnet-link: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani?